Browsing: » Home »ထူးဆန်းထွေလာ»Amazing Tree House in Philippines! ဖိလစ်​ပိုင်​ငံရှိ သစ်​ပင်​​ပေါ်က အိမ်​က​လေး	Leaveacomment
Amazing Tree House in Philippines! ဖိလစ်​ပိုင်​ငံရှိ သစ်​ပင်​​ပေါ်က အိမ်​က​လေး	Posted by danyawadi on April 9, 2016 in ထူးဆန်းထွေလာ, Discovery	သစ်ပင်ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးပါ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖြစ်ပါတယ်။
← ကျပ် ၅၀၀ တန် ထီလက်မှတ် ဆုကြေးတွင် ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀၀ အပြင် ကျပ်သိန်း ၅၀၀၀ နှင့် ကျပ်သိန်း ၁၀၀၀ ဆုကြေးများ လည်း ပါဝင်မည်။	ဂဠုန်ဦးစောကို တရားစီရင်ခဲ့သည့် အထူးခုံရုံး အဖွဲ့ဝင် သီရိပျံချီ ဦးစီဘူး (၁၈၉၈-၁၉၅၃) →